Shirka Musharraxiinta xilka madaxweynaha oo si rasmi ah uga furmay Muqdisho | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Shirka Musharraxiinta xilka madaxweynaha oo si rasmi ah uga furmay Muqdisho
Shirka Musharraxiinta xilka madaxweynaha oo si rasmi ah uga furmay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Ilaa iyo 12 musharax oo garabka mucaaradka ah ayaa Sabtida maanta ah shir uga furmay Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho, kaasi oo looga hadli doono doorashada dalka ee sanadkan 2020/21.
Hoggaamiyeyaasha Mucaaraadka ah ayaa maanta shir uu uga furmay Muqdisho kaasoo ku saabsan Arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale dooda ay ka qabaan guddiga doorashooyinka dadban oo in badan oo ka mid ah ay kasoo horjeesteen.
Wuxuuna shirkaan socon doonaa ilaa iyo Saddex berri, waxaa ka mid ah qodobada looga hadlaayo sidii loo heli lahaa guddi dhexdhexaad ah, maadaama guddiga hadda jira lagu eedeeyay in ay yihiin taageerayaasha Madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha Hay’adda Nabadsugidda ee NISA.
Musharraxiinta xilka madaxtnimada dalka ee Shirkaan ka qeyb galay waxaa ka mid ah:-
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta Halqaran.com u sheegay, in shirka Midowga Musharaxiinta lagu dhisi doono Guddiyo iyo hoggaan hormuud u ah Isbaheysiga Musharaxiinta, waxaana uu yeelan doonaan Afhayeen warbaahinta la hadla.
DF Soomaaliya ilaa iyo hadda wax war ah dhankeeda kama aysan soo bixin dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee socda iyo kulanka maanta u furmay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah oo u badan musharixiin mid walba uu si gaar ah u doonayo xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya.
Shirka midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha